ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » 12 မစ္စစ်သည် Haves ဖြစ်ရမည်. မှန်သော
အားဖြင့် ငါ့ Lim က
1. ချိန်ခွင်ကိုထိန်းသိမ်းနေစဉ်သူမ၏အသက်တာအကြောင်းကိုအသည်းအသန်သူသည်တစ်စုံတစ်ဦး. သူကသူမ၏စိတ်ကူးယဉ်တဲ့ဆက်ဆံရေး Be, သူမ၏မိသားစု, သူမ၏အလုပ်, မိမိကိုယ်ကိုနှင့်လုပ်အားပေး. သူမ၏ပတ်ဝန်းကျင်လောက်အသည်းအသန်သူသည်တစ်စုံတစ်ဦးကဘဝတွေကိုမှုတ်သွင်းနေထိုင်ခဲ့. ငါတို့ရှိသမျှသည်အနည်းငယ်လှုံ့ဆော်မှုကိုသုံးနိုင်သည်.
2. လိုအပ်လာသည့်အခါလိုအပ်သည့်အခါအန္တရာယ်ကျရောက်စေခြင်းငှါရဲစွမ်းသတ္တိရှိပြီးအထက်စီးသူတစ်ဦး. သူမသည်သူမ၏နှင့်အတူဓာတုဗေဒရှိသည်သောသူတို့အားထဖွင့်လှစ်ရန်ရွေးချယ်ဒါပေမယ့်သူမကလိုအပ်တဲ့အခါရှင်းရှင်းလင်းလင်းနယ်နိမိတ်များကိုဆွဲရန်တတ်နိုင်.
3. သင်နှင့်အတူကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖြစ်နိုင်သူတစ်စုံတစ်ဦး. တရားသူကြီးမှခုန်ချဒါပေမယ့်နားလည်သဘောပေါက်ရန်တက်လှမ်းနှင့်အမှန်ကိုဖော်ထုတ်ဖို့မပါဘူးသူတစ်ဦးသဘောမတူရန်သဘောတူနိုင်သူအတူတူလူတဦးဖြစ်ပါသည်.
4. ထို compliments သူတစ်စုံတစ်ယောက်3သင်နှင့်သင်ကသူတို့ချီးမွမ်းလောက်ပိုဆိုးအားနည်းချက်တွေကို3ပိုမိုဆိုးရွားအားနည်းချက်တွေကို. နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်သော့ချက်ဖြစ်သည်. သင်ကဗျာနဲ့ပွုသကဲ့သို့သင်၏အသက်တာကိုအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်သူတစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာပါ. Long ကပင်ပန်းတယ် Checklists လွတ်လပ်သောသည်မဟုတ်; ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးမှာခြေချင်းင်.
5. ကြင်နာမယ့်အစားမှန်ကိုရွေးချယ်သူတစ်ဦး. ထိုစားပွဲထိုးကနေလမ်းပေါ်မှာအိမ်ခြေမဲ့လူတစ်ဦးမှသူမကိုယ်သူမှ.
6. သူမနာကြည်းဖြစ်၏ဟုဆိုနိုင်သူတစ်စုံတစ်ဦး. ကျွန်မအမှားတွေကိုဝန်ခံဖို့လိုလိုလားလားရှိအနာရောဂါငြိမ်းစရာဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့ကြီးမြတ်ခြေလှမ်းဖြစ်တယ်လို့သူကရှာတွေ့. မကြာခဏကြိမ်, မလုံလောက်သည်ကောင်း၏.
7. အလွန်ကြီးစွာသော conversationalist သူသည်တစ်စုံတစ်ဦး. သူမအလွန် Multi-အသွင်အပြင်နှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကိုယ့်သူမရဲ့စကားပြောနေတာကိုချစ်.
8. Intellectual စပ်စုသူသည်တစ်စုံတစ်ဦး. သူမသည်ကျွန်တော့်အရာအားလုံးနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းထုတ်, မိမိကိုယ်ကိုနှင့်သင်ယူခြင်းကိုရပ်တန့်မထားဘူးတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်.
9. သင်နှင့်အတူခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ကာလကိုဖြတ်သန်းသွားချင်သူတစ်ဦး. အမှုအရာတောင်ဘက်သွားကြသောအခါသူမသည်ခင်ဗျားအနားမှာရပ်နေနှင့်သင်ကိုထောက်ပံ့ဖို့ဇွဲရှိတယ်.
10. သူမ၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကောင်းသောစောင့်ရှောက်သောသူတစ်စုံတစ်ဦး. သူမသည်သူတို့ကျန်းမာသေချာစေသည်, သန့်ရှင်းသောမင်္ဂလာ. သူမကအခိုင်အမာဆိုရင်သူမရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များချစ်သောသူဒါပေမဲ့သူတို့ disarray တစ်ပြည်နယ်တွင်ရှိ, သူမသင့်ကိုချစ်လျှင်စဉ်းစားကြည့်ပါ? သင်သည်ငါ့မျောရ.
11. တစ်သမတ်တည်းသင့်အဘို့အနည်းငယ်သောအရာတို့ကိုကျင့်သောသူတစ်စုံတစ်ဦး. ထိုအမှုအရာတို့ကိုကျင့်ကိုကျင့်သောနေ့၌နေ့ထွက်အပ်နှံခြင်းတွေအများကြီးကပြောပါတယ်.
12. အလားတူဘဏ္ဍာရေးအမြင်များရှိသူတစ်စုံတစ်ဦး. သင်သည်သင်တို့၏ဆက်ဆံရေးမွေ့လျော်နိုင်အောင်တည်ငြိမ်တဲ့ဘဏ္ဍာရေးအနာဂတ်တည်ဆောက်ချင်တယ်. သင်လုပ်ချင်တာနောက်ဆုံးသောအရာတစုံတခုကိုငွေနှင့် ပတ်သက်. ကိုစစ်တိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်.